ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်တစ်ခု | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
July 28, 2006, 12:44 pm
Filed under: True Feelings
ကျွန်မ လင်းလက်ကြယ်စင်ကို ချတ်ရွန်းတစ်ခုက ကျွန်မလေးစားရတဲ့ လူတစ်ဦးအပြောတွေကြောင့် ဒီစာကို ရေးလိုက်မိတယ်။ ပါးပြင်ပေါ်က မျက်ရည်စတစ်ချို့ကို ကျွန်မသုတ်ရင်း မျက်လုံးတွေကို ခဏမှိတ်ထားလိုက်တယ်။ မျက်ဝန်းထဲမှာ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အာဏာရှင်တွေကို တစ်ယောက်ချင်း မြင်ယောင်ရင်း ထပ်မံကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကို မတားဆီးနိုင်တော့ဘူး။ ရင်ထဲ တဆစ်ဆစ်နာကျင်နေမိတယ်။ `ကိုယ့်စာဖတ်ပရိသတ်ကို သတ်မယ့် စာရေးသူ´လို့ စွပ်စွဲသံတွေကို ကျွန်မ တောက်တစ်ချက်ခေါက်ရင်း မနည်းပြန်ဖြေသိမ့်နေရတယ်။
ကျွန်မငယ်ငယ်ကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းသင်းခွင့်မရှိဘူး။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘယ်အရာကိုမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ ယုတ်စွအဆုံး ကျွန်မမိသားစု စားသောက်ဆိုင်သွားရင်တောင် စားချင်တာမှာခွင့်မရှိပါဘူး။ ဘယ်သူငယ်ချင်းကိုမှ ဖုန်းပြောခွင့်လည်းမရှိပါဘူး။ ဘယ်နေရာကိုမှလည်း ဘယ်သူငယ်ချင်းနဲ့မှသွားခွင့်မရှိပါဘူး။ ကျွန်မညနေခင်းတွေ ကလေးဘ၀က တစ်ခြားသူတွေနဲ့အတူ ပြေးလွှားကစားချင်ပေမယ့် ခွင့်ပြုချက်မရှိပါဘူး။ ကျွန်မအတွက် အမြဲတမ်းရှိနေမှာ နာခံရမယ့်အမိန့်တစ်ခု။ ကျွန်မရှင်သန်လာတာ အမိန့်တွေခံယူဖို့လေ။ ကျွန်မ၀န်းကျင်မှာ ပြိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ အပြည့်ရှိတယ်။ ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေနဲ့ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတဲ့ စီးပွားရေးဆန်ဆန်လူသားတွေပဲရှိတယ်။ အောင်မြင်မှုကိုသိပ်မက်မောပြီး အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ စာနာခြင်း ၊ နားလည်ခြင်း ၊ ပျော်ရွှင်မှုအစစ်ဆိုသော ရသတွေ ကျွန်မရှင်သန်ခဲ့သော ၁၈နှစ်လုံး တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့ဘူး။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဗီဇဆိုတာ ဘယ်တူပါ့မလည်း။ ထုံးစံအတိုင်း မွန်းကျပ်သော ဘ၀မှာ ၁၀တန်းအထိ ရှင်သန်ရင်း ကျွန်မ ၂၀၀၄ခုနှစ်ရဲ့ တစ်ရက်မှာ ခြင်္သေ့ကျွန်းကို စရောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မ ၁၀တန်းတုန်းက စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ကျွန်မထင်မြင်ချက်တွေကို အရေးကောင်းလို့ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးတင်လှိုင်ကောင်းမှုကြောင့် မြို့မကျောင်းမှာ ဘာပြသနာမှ မတက်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မက စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမြတ်နိုးတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မကြိုးစားရေးချင်တယ်။ အွန်လိုင်းတွေသုံးတော့ ကျွန်မအတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုရခဲ့တယ်။ ကျွန်မ ၀ါသနာကိုခိုးလုပ်ခွင့်လေးတစ်ခုပေါ့။ ကျွန်မက ၀ါသနာပဲရှိတော့ စာဖတ်အားကောင်းအောင် စာအုပ်တွေခိုးဖတ်ရတယ်။ အိမ်ကမသိအောင် ခိုးဖတ်ရတဲ့အပြင် ကျွန်မက ပြည်ပမှာဆိုတော့ ၀ယ်ရအနည်းငယ်ခက်ပါတယ်။ ၀ါသနာတွန်းအားတွေကြောင့် ကျွန်မအိမ်က မသိအောင် ကျွန်မစာတွေရေးရင်း ၊ ဒေါက်ထောင့်ကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေကို ရအောင်ရှောင်ရင်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာ အတွေးအခေါ် ၊ ဗဟုသုတရအောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ကျွန်မ မသိတာတွေကိုလည်း မောင်နှမတွေကိုမေးမြန်းရင်း ကျွန်မ အသိုင်းဝိုင်းမသိအောင်နေခဲ့တယ်။ ကံဆိုးတယ်ပဲပြောရမလား။ ဒုတိယမြောက် ဇတ်လမ်း မဆုံလို့ခွဲအပြီး အကြင်နာကြီးမားတဲ့ကောင်မလေးရေးနေချိန်မှာ ကျွန်မလုပ်ရပ်တွေကို ကျွန်မအိမ်ကသိသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ပြင်းထန်တဲ့ ဆူသံတွေနဲ့ ကျွန်မရဲ့ တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုတဲ့အသံတစ်ခုအဆုံးမှာ ပါးပြင်တစ်ဖက်မှာ အရှိုးရာတစ်ခုထင်ဟပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မနာကျင်စွာ ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ ရင်ထဲကဒဏ်ရာတစ်ခုက ပါးတစ်ချက်ကိုရိုက်လိုက်တာထက် အများကြီးပိုနက်နဲတယ်ဆိုတာ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အာဏာရှင်များ သိသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလို မျက်ရည်မကျဘဲ နာကျင်စွာပြုံးတာကို သူတို့အလွန်မုန်းပါတယ်။ မငိုချင်ပါဘူး။ ဘာလို့ငိုရမှာလည်း လူတွေရှေ့မှာ ကျွန်မ မငိုတတ်ဘူး။ လူကွယ်ရာမှာသာ သေအောင်ငိုချင်ငိုမယ်။ ကျွန်မလုပ်နေတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို သူတို့အားလုံးက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ကျွန်မ၀ယ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေအကုန်လုံးလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မခိုးတီးတဲ့ piano ကိုလည်း သူများပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်မ ၀ယ်ထားတဲ့ လှပသော ပန်းခြင်းတွေကိုလည်း ကဗျာဆန်လွန်းတယ်ဆိုပြီး အမှိုက်ပုံးထဲ ဂျောင်းတဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရအောင်ဆက်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အခက်ခဲတွေအများကြီးကြားက ကျွန်မရအောင် ဆက်ရေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက် ကျွန်မဖုန်းပြောနေချိန် တစ်ဖက်လူက စကားတစ်ခွန်းမှားသွားတာကြောင့် ကျွန်မစာဆက်ရေးနေတာကို သူတို့သိသွားပြန်တယ်။ ဘာလုပ်လည်း ရှင်တို့သိလား. ကျွန်မကိုအိမ်ထဲ သော့ခတ်ထားလိုက်တယ်.. ဟဟ အတော်ရီရတယ် ရှင်တို့သိလား… ကျွန်မကလည်း အေးအေးလေးပဲနေပြလိုက်တယ်… အဲဒီိလိုအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် ကျွန်မ အွန်လိုင်းပေါ်က မကြာခဏ လနဲ့ချီပျောက်သွားတတ်တာ ကျွန်မနဲ့နေ့စဉ် စကားပြောနေကျသူတွေသိပါတယ်..
အတားအဆီးဆိုတာ တစ်သက်လုံးတည်ရှိနေပေမယ့် မရရအောင် ကြံဖန်လုပ်ဆောင်တဲ့အကျင့်က ကျွန်မအရိုးထဲစွဲနေခဲ့တယ်… လက်နဲ့စာချရေးတယ်.. ခင်တဲ့သူတွေကို စာစီခိုင်းပြီး ပို့ခိုင်းလိုက်တယ်.. မကောင်းဘူးလား… လင်းလက်ကို ပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ဝေဖန်တဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေကိုဖတ်ပြီးတိုင်းလည်း ဆင်ခြင်နိုင်ခဲ့တယ်.. ဝေဖန်ရေုးကို ကျွန်မခံနိုင်ပါတယ်.. စော်ကားမှုကိုတော့ လက်မခံပါဘူး.. ဒီစာတွေချရေးလွန်းလို့ မိသွားတဲ့အခါတိုင်း အွန်လိုင်းပေါ်က မိန်းမတစ်ယောက်လက်ချက်ကြောင့် ကျွန်မအသိုင်းဝိုင်းသိသွားတိုငး ကျွန်မကိုအိမ်ပေါ်ကတောင်နှင်ချပါတယ်……… ပါ့စ်ပို့နဲ့အိုင်စီပစ်ပေးပြီး ထွက်သွားတဲံ… အဲဒီအချိန်တုန်းက east coast မှာ ကျွန်မတစ်နေကုန်သွားထိုင်နေတာပေါ့… အချိန်တန်တော့လည်းကျွန်မမေမေ ဘယ်နေနိုင်မှာလည်း.. ပြန်လာခေါ်တာပဲ… ကျွန်မတော့ ခပ်မဲ့မဲ့ပါပဲ….. သင်္ကြန်အိပ်မက်ဆိုးစာမူ သံလွင်အိပ်မက်မှာပါလာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မဘိုးတော်ဘုရား ဘယ်လိုသိသွားလည်းမသိ.. ကျွန်မနဲ့ အကြီးအကျယ်တိုက်ပွဲပါပဲ… ကျွန်မက သူ့ကိုတရားမျှတသော လွတ်လပ်မှုတွေကိုတောင်းဆိုပါတယ်..သူက ကျွန်မကိုသွင်းထားတဲ့ပုံစံ ဘာလည်း ရှင်တို့သိလား… no reason .. no reply တဲ့လေ ဟဟဟဟဟ …… ကျွန်မက သူကျေနပ်အောင် သူသင်ခိုင်းသော ဘာသာရပ်တွေ သင်ကြားပေမယ့် ကျွန်မဘက်က တောင်းဆိုခွင့်တွေကိုတော့ အသိမှတ်မပြုပါဘူး…. အဲဒီအတွက် အနာကျင်ဆုံးသောနှလုံးသားက ကျွန်မနှလုံးသားပါ.. ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မိသူဆိုရင် ထောင်ထဲဝင်ရပါတယ်…. မကောင်းတာလုပ်သူဆိုရင် ငရဲကျပါတယ်.. ကျွန်မ နားမလည်တာ မွေးကတည်းက ဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်မ ဘာလို့တစ်သက်တာ လှောင်အိမ်ထဲက တောင်ပံကျိုးခံထားရသော ငှက်ဖြစ်နေပါလည်းဆိုတာကိုပါပဲ…
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မနှလုံးသားကနေ့စဉ်နဲ့အမျှ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ နာကျင်နေပါတယ်.. အသေးအမွှားကိတ်စလေးတွေကအစ ကျွန်မစိတ်ညစ်ရပါတယ်.. ဥပမာဆိုပါစို့.. ကျွန်မရေချိုးခန်းဝင်နေတယ်. ကျွန်မဘိုးတော်က ဖုန်းခေါ်ပါတယ်.. ကျွန်မ မကြားလို့မကိုင်လိုက်မိဘူးဆိုရင် ကျွန်မအတွက် အဲဒီနေ့ငရဲပါပဲ. ကျွန်မကို ပြောထားပါတယ်. တစ်အိမ်လုံးဖုန်းတွေနေရာအနှံ့တပ်ထားတယ်.. ဘယ်နေရာမဆိုရှိတာ သေရေးဖြစ်နေရင်တောင် ဖုန်းကိုင်ရမတဲ့… နောက်တစ်ခု — ထမင်းစားချိန်ပါ… ကျွန်မက အသားစားတာနည်းပါတယ်. အဲဒါလည်း အမြဲအမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မကို အစားရှောင်လို့တဲ့လေ.. နောက်တစ်ခု — ကျောင်းကပြန်တာ အိမ်ကို ၁၀မိနစ်ထက်ပိုနောက်ကျ၇င် ကျွန်မအတွက် အဲဒီနေ့ အပြတ်အသတ်တိုက်ပွဲပါပဲ.. အဲဒီလို အသေးအမွှားပေါင်းများစွာကအစ အကြီးဆုံးပြသနာတွေထိ ကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်ပြသနာပါ…
တစ်ချို့ကတော့ ကျွန်မကို ပြောပါတယ်. Problem child ဖြစ်နေမယ် သတိထားတဲ့… ကျွန်မက ခပ်အေးအေးလေးပဲ ရီနေလိုက်တယ်.. ကျွန်မ type က ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဘ၀ကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖြတ်သန်းချင်တယ်… အဲ ကျွန်မအသိုင်းဝိုင်းကျတော့ အဲလိုမျိုးမဟုတ်ကြဘူး… အင်း ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မအပြင်က ဘ၀ပြသနာတွေကို ကျွန်မစာပေထဲ ဖြေသိမ့်လိုက်တယ်.. ကျွန်မနာကြဉ်းချက်တွေကို ဖိုရမ်တွေပေါ် ဖျောက်လိုက်တယ်… ကျွန်မမှာ သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိတယ်… သူက ကျွန်မဘ၀အကြောင်း အကုနသိတယ.်. သူက ကျွန်မကိုအမြဲအားပေးနှစ်သိမ့်သူပေါ့.. သူက ကျွန်မရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတဖြစ်လဲ ချစ်သူလေးပေါ့….. သူနဲ့ကျွန်မ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲလက်တွဲရင်း ဘယ်သူမှမသိအောင် ပိပိရိရိနေခဲ့ကြတယ်.. အမြဲတမ်း ကျွန်မကို ဒုတ်ခမပေးရရင် မနေနိုင်တဲ့ ကံတရားက ကျွန်မရင်ခွင်ထဲကချစ်သူလေးကို တစ်သက်တာ ဆွဲထုတ်သွားပြန်ရော…. ကျွန်မ သူ့အတွက် ရေးစပ်ခဲ့သော ကဗျာတွေအားလုံး အဲဒီနေ့က တစ်စစီဖြစ်ကုန်ရော.. နာကျင်နေသော ဘ၀ထဲမှာ အချစ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကန့်လန့်ဖြတ်ဒဏ်ရာကြီးက လင်းရင်တစ်ခုလုံးကို တိုက်ခိုက်လျက်ပေါ့.. ဒါပေမယ့် ကျွန်မရအောင်ဖြေခဲ့တယ်.. ကျွန်မကိုချစ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေရှီသေးတယ်..သူတို့ love နဲ့ ကျွန်မ ဆက်လက်ရှင်သန်သွားမယ်… ကျွန်မကြိုးစားစာတွေဆက်ရေးတယ်……. ဒါပေမယ့် ဒဏ်ရာရထားတဲ့ငှက်တစ်ကောင်လိုပေါ့.. အရင်လို သိပ်မမြန်တော့ဘူး……
ကျွန်မစာတွေရေးရင်း အသိတွေအတော်များများရခဲ့တယ်.. နောက်ပိုင်း ကျွန်မနဲ့ခင်တဲ့ အသိတစ်ယောက်က လာပြောတယ်…. ဘလော့ခ်ရေးဖို့အကြံပေးတယ်… ကျွန်မက အိုင်တီနဲ့ပတ်သတ် သိပ်အများကြီးမသိပါဘူး.. သိသူတွေထဲက ပြန်လည်သင်ယူနေရသူပါ… ဘလော့ခ်ဆိုတာ ကျွန်မဖတ်ပဲဖတ်ဖူးတာ.. ကိုယ်တိုင်မရေးဖူးဘူး…… အသိတွေကလည်း ကျွန်မကိုရေးဖို့ တိုက်တွန်းကြတယ်… ကျွန်မလည်း စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ရေးဖြစ်တယ်.. ကျွန်မက အမှန်ကိုအမှန်လိုပဲရေးလိုက်မိတယ်.. ရွှေနိုင်ငံကိုချစ်လွန်းလို့ ကျွန်မခံစားချက်တစ်ချို့ အမှန်တရားတစ်ချို့ကို ဒီအတိုင်းရေးသားဖြစ်တယ်.. ကျွန်မရေးတဲ့စာတွေအတွက် ကျွန်မအမြဲဝန်ခံလေ့ရှိပါတယ်. ကျွန်မအသက်အရွယ် ငယ်ပါသေးတယ်. ကျွန်မ အရည်အချင်းမပြည့်သေးပါဘူး.. ကျွန်မ အများကြီးကြိုးစားရအုန်းမယ.်… ဝေဖန်ရေးတွေကိုလက်ခံပါတယ်.. စော်ကားမှုတွေကိုတော့ ရှုံ့ချပါတယ်..
ကျွန်မထကိ အဆ ၁၀၀လောက် ဗဟုသုတပိုများပြီး ကျွန်မလေးစားရတဲ့ လူတစ်ဦးရှိပါတယ်.. ဒီနေ့ညနေမှာတော့ အဲဒီလူတစ်ယောက်ကပဲ ကျွန်မစိတ်ဓါတ်ကို အောက်ပြုတ်ကျအောင် ထပ်မံလုပ်လိုက်ပါတယ်…. ကျွန်မ ဘလော့ခ်မှာတင်ထားတဲ့ ရွှေနိုင်ငံအကြောင်းကြောင့်ပေါ့… လူတိုင်းမှာ လူသားအခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်.. အမိမြေမှာမပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျွန်မက ပြည်ပမှာသုံးစွဲမိတယ်.. ကျွန်မစာတွေကို ကျွန်မရေးတာ ဘယ်သူ့ကိုမှထိခိုက်နစ်နာလိုစိတ်မထားခဲ့မိပါဘူး…. ကျွန်မရေးတဲ့စာတစ်ပုဒ်က ဘယ်သူ့ကိုမှရည်ညွန်းခြင်းမရှိသလို ဘာကိုမှလည်း နာလိုစိတ်မရှိပါဘူး.. ကျွန်မပိုင်ဆိုင်တဲ့ လွတ်လပ်သောအတွေးအခေါ်ကို ဖြန့်ကျက်ထားခြင်းပါ.. ဆိုဒ်တစ်ခုခု ဘန်းခံထိရင် ကျွန်မကိုသတ်မယ်တဲ့.. ကျွန်မ ဟားတိုက်သာရီလိုက်ချင်တယ်… မကျေနပ်ရင် ကျွန်မကိုတိုက်ရိုက်လာပြောခွင့်ရှိပါတယ်.. အဆိုးဆုံးက ကျွန်မစာဖတ်သူတွေကို ထိခိုက်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မရင်ထဲစူးနင့်နေအောင်ခံစားသွားရတယ်.. ကျွန်မ တစ်ခါမှ အဲဒီလိုမရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး.. ကျွန်မရေးလိုက်တဲ့ဘလော့ခ်ကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း နစ်နာလိုစိတ်မထားခဲ့ပါဘူး.. ကျွန်မခံစားရတာကိုတောင်မှ အပြင်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တင်ပြခွင့်မရှိရင် လူဆိုတာ ဘာလည်း နားမလည်တော့ဘူး.. နေရာတကာ သြဇာတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ ရွှေနိုင်ငံမှာ ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မှမပေးတာ.. ခက်တာ အိုင်တီပြသနာရှင့်.. အဲဒီလူပြောသလို ကျွန်မနိုင်ငံရေးတစ်ချို့တင်ပြထားတာကို ဘယ်နေရာမှာမှ စာမကပ်တတ်ဘူး.. ပြောထားသားပဲ.. ကျွန်မစာပဲတတ်တယ်.. အကုန်မသိဘူးလို့…
`မလောက်လေးမလောက်စားနဲ့ သူများတွေကိုတက်ဝေဖန်တယ်´တဲ့.. အဲဒီတစ်ယောက် ပြောတဲ့စကားပါ.. ကျွန်မ မေးခွန်းတစ်ခုပြန်မေးပါရစေနော်.. အလယ်တန်းကျောင်းသူလေးကရော သူ့အမြင်ကို ငယ်သေးတာနဲ့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလား.. အထက်တန်းကျောင်းသူကရော သူ့အတွေးနဲ့သူ ဘယ်အရာမဆို ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလား.. ဒီလိုပဲ ကျွန်မကလည်း ကျွန်မစိတ်ထဲက ခံစားချက်များနဲ့အတူ လူတိုင်းသိသော အမှန်တရားထဲက မြူမှုန်လောက်ကို တင်ပြရေးသားလိုက်ာ အပြစ်က အဲဒီလောက်ကြီးသွားရောလား…. ကျွန်မအသက်၁၈ဆိုတာနဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ဘယ်နိုင်ငံဥပဒေက ပြဌာန်းထားပါသလည်း. အဲဒီမူကြီးကိုသိချင်လွန်းလို့ပါရှင်…
ကျွန်မလုပ်လိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုက မှားနေတာမှမဟုတ်တာ… သူ့နေရာနဲ့သူကျွန်မရေးထားတာပဲ… စာထဲကလို ကျွန်မ စောက်ရူးဖြစ်မှာပါ… အဲဒီခေါင်းစဉ်လေးကို သဘောကျပါတယ်.. သေချာပါတယ်. ရူးနေခဲ့ရင်တောင် ဒါစာအရူးပဲ.. သူများလို ပေါက်ကရမရူးဘူး.. လူတိုင်းကို ကျွန်မဘယ်သူလည်း ပြောရဲတယ်.. ကျွန်မ ဘယ်ကလည်းသိတယ်.. ချုံပုတ်ထဲကနေ ဘယ်သူမှ လက်သီးမဆုပ်ပြပါဘူး… ကျွန်မ အရည်အချင်းမပြည့်သေးဘူး.. ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နဲ့ရေးခွင့်ရှိတယ်.. တကိုယ်ကောင်းဆန်တာမဟုတ်ဘူး.. ကျွန်မရေးလိုက်တဲ့စာလေးကို ဖွင့်လိုက်မိတာနဲ့ ဘာများဖြစ်သွားမှာမို့လည်း. ဘန်းခံထိမှာ ကျွန်မ မကြောက်ပါဘူး.. ရွှေမြို့တော်ကြီးက ဘယ်ဆိုဒ်မှမကျန် ဘန်းနေတာ ဘာဆန်းလည်း.. ကြောက်တတ်ရင် လင်းလက်ကြယ်စင်နာမည်နဲ့တောင် စာမရေးခဲ့ဘူး…
ကျွန်မ တစ်ညနေလုံးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရလို အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်.. ကျွန်မ မရည်ရွယ်ပါဘူး.. ကျွန်မစာဖတ်သူအားလုံးကို ကျွန်မ အနှိုင်းမဲ့ချစ်ပါတယ်.. ကျွန်မဘက်က အပြင်လောကမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက် ကျွန်မကိုယ်ပိုင်ထူထောင်ထားတဲ့ စာပေဘ၀မှာ ဘယ်သူမှ လာတားဆီးတာလည်း မကြိုက်ပါဘူး…… ကျွန်မကိုဝေဖန်လို့ရပါတယ်… လက်မခံနိုင်လည်းရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မလုပ်နဲ့ မပြောပါနဲ့.. ကျွန်မဘ၀မှာ အဲဒီလို မလုပ်နဲ့ မသွားနဲ့ မစားနဲ့ ဒါတွေပဲကြားရတာများလို့ အဲဒီစကားလုံးတွေဆို ကျွန်မခါးသက်နေအောင်မုန်းတယ်…
ရှင်တို့ရင်ထဲမှာ ကျွန်မစာတွေကို လက်မခံနိုင်ရင် ပစ်ပစ်ခါခါပြောလိုက်ပါ.. ရှင်တို့မျက်လုံးထဲမှာ ကျွန်မက အထင်သေးစရာ ခပ်ငယ်ငယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ရင် စုတ်ပြတ်အောင်ပြောဆိုလိုက်ပါ…… ရှင်တို့အတွေးထဲ ကျွန်မကို တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်ထင်ရင် လင်းလက်ဘက်ကို ခဏငဲ့ကြည့်ပေးလိုက်ပါ…. ရှင်တို့အားလုံးမျက်လုံးထဲ ကျူပ်က ဘာမှတန်ဖိုးထားစရာ မရှိရင် စောက်ရူးတစ်ကောင်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါ… ဒါပေမယ့် အမိန့်ပေးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့…. အပြင်လောကက ကျွန်မက အသိုင်းဝိုင်းမိဘတွေရဲ့အမိန့်တွေကိုခံရလွန်းလို့ တခြားနေရာမှာ ခေါင်းညိတ်ပေးဖို့ဆိုတာ အတော်ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါတယ်……….
စာတစ်ပုဒ်ရဖို့ ပြောခံခဲ့ရသော အပြောတွေ ၊ အခက်ခဲတွေ ၊ အိမ်ပေါ်က ခဏခဏဆင်းရသောရက်တွေ ၊ ကျခဲ့သော မျက်ရည်တွေ ၊ဒါတွေအားလုံး ရှင်တို့မှာ မရှိပေမယ့် လင်းလက်ကြယ်စင် နှလုံးသားထဲရှိနေတယ်…. အားလုံးကိုဆန့်ကျင် ကျွန်မချစ်တာ ဒီစာတစ်ခုတည်း… ပေါ်တင်မကြိုးစားရဲတဲ့ကျွန်မဘ၀ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ဒီအသိုင်းဝိုင်းကြားက အခက်ခဲတွေ ရှင်တို့မျက်လုံးတွေ တစ်ချက်လောက်ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါ.. ကျေးဇူးပြုပြီး ဝေဖန်ပါ.. လူကို မစော်ကားပါနဲ့….